Maitiro Ekuumba Joint Venture Yekukura Bhizinesi Rako
Mubatanidzwa wekubatana ibato repamutemo mapato maviri kana anopfuura mafomu ekushandira pamwe mukana wehupfumi. Mapato ese ari maviri anopa kuenzana muchimiro chezvinhu uye / kana masevhisi. Ipapo ivo vanogovana mune mari, mari, uye kudzora kwebhizinesi. Iyo bhizimusi inogona kuve yeimwe chaiyo projekiti chete, kana kuenderera bhizinesi hukama. Semuenzaniso ndeyesangano rekubatana reSony Ericsson. Izvi zvinopesana nemubatanidzwa wemauto; iyo isingabatanidzi chikamu chekuenzana nevatori vechikamu, uye iri rakadzikira zvakanyanya kurongeka. Kazhinji mapato acho anoumba mubatanidzwa kana LLC kuti vatevedze bhizinesi uye kuchengetedza mapato kubva pachikwereti.
Mamwe masangano kunze kwemabhizinesi anogona zvakare kugadzira mubatanidzwa; semuenzaniso, sangano rezvekuchengetwa kwevana kuMidwest rakatanga mubatanidzwa pamwe chete nemamwe masangano evana, nezvimwewo, iro basa raro nderekugadzira nekushandira software yekuteedzera yevatengi yemasangano ebasa revanhu. Vashanu vashamwaridzani vese vanogara paboka remubatanidzwa wekambani yebhodhi, uye pamwe chete vakakwanisa kupa nharaunda dura rinodiwa kwazvo.
Joint Ventures Anoshandiswa riini
Joint ventures yakajairika mune oiri uye gasi indasitiri, uye inowanzo kuve mushandirapamwe pakati pemakambani emuno neekunze. Vanenge vatatu-vana ndevepasi rese. Mubatanidzwa wekudyidzana unowanzoonekwa sewe unoshanda bhizinesi sarudzo mune ino chikamu, sezvo makambani anokwanisa kubatsiridza hunyanzvi hwavo maseti nepo ichipa iyo yekune imwe nzvimbo nzvimbo iripo. Zvidzidzo zvinoratidza kukundikana mwero we 30-61%, uye iyo 60% yakatadza kutanga kana kupera mukati memakore mashanu. (Osborn, 5) Zvinozivikanwa zvakare kuti ma Joint ventures mune dzakasimukira nyika anoratidza kusagadzikana kukuru, uye kuti maJVs anosanganisira vehukama vanobatana nehurumende vane huwandu hwakanyanya hwekukundikana (makambani akazvimirira anoita kunge akave akashongedzerwa kupa hunyanzvi hwakakosha, kushambadzira netiweki, nezvimwe .) Uyezve, maJV akaratidzira kukundikana zvinosiririsa pasi pekuda kwakanyanya uye nekukurumidza shanduko mune zvigadzirwa zvigadzirwa.
Zvakanakira Kugadzira Joint Venture
Kuparadzira mutengo uye njodzi
Kuvandudza kuwanikwa kwemari zviwanikwa
Zvinotarisirwa Ehupfumi hweScale
Kuwana kune matekinoroji matsva kana akasiyana uye vatengi
Kuwana kune nyowani, dzakasiyana, kana hunyanzvi manejimendi maitiro
Zvakaipira Joint Venture
Zvichienderana nemitemo yemuno, kana bhizimusi renyika dzese
Kukanganisika kune zvisizvo zvinoda kana kukurumidza shanduko muhunyanzvi
Yakakwira mwero wekukundikana, zvakaenzana